Hello Nepal News » हराएको कुकुर खोज्न हवाईजहाज बुकिङ : लाखौं पुरस्कार घोषणा !
हराएको कुकुर खोज्न हवाईजहाज बुकिङ : लाखौं पुरस्कार घोषणा !
यदि मानिसलाई कुनै चिज मन पर्यो भने त्यसका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छ । विभिन्न जनावरहरुप्रति पनि मानिसहरुको निकै लगाव भएको देखिन्छ । मानिस र जनावरहरुबीचको मित्रताबारे तपाईंले कैयन् कथाहरु सुन्नुभएकै होला । अमेरिकाको सनफ्रान्सिस्कोमा हालै एउटा यस्तै घटना सार्वजनिक भएको छ । त्यहाँ एकजना महिलाले आफ्नो हराएको कुकुर खोज्न हवाईजहाज नै भाडामा लिएकी छिन् ।
उनको कुकुर एउटा किराना पसलबाट हराएको थियो । कुकुर खोज्नका लागि उनले धेरै प्रयास गरिन् तर अहिलेसम्म पनि फेला परेको छैन । एमिली नामकी महिलाले पालेको नीलो आँखा भएको ज्याक्सन नामको अस्ट्रेलियन शेर्फड नामको कुकुर गत डिसेम्बर १५ का दिन हराएको थियो ।
उनीहरु यत्तिमा मात्र रोकिएनन् । हराएको कुकुर खोज्नका लागि www.bringjacksonhome.com नामक वेबसाइट नै तयार गरे र त्यसमा हराएको कुकुरबारे सबै जानकारी दिँदै कुकुर फेला पारेर बुझाइदिनेलाई लाखौँ पुरस्कारको घोषणा गरे । आफ्नो कुकुर फेला परिदिनेलाई ७ हजार डलर पुरस्कार दिने उनको घोषणा छ ।
उक्त कुकुरको तौलो १३ किलो छ भने कुकुर कालो, सेतो र खैरो रङका मिश्रति भुत्ला भएको छ । सो कुकुरको टिन्डर अकाउन्ट पनि रहेको छ ।
प्रकाशित मिति २८ पुष २०७६, सोमबार १७:११